Saddex Deegaan oo Muhiim u ah Dalxiiska Kenya oo uu ka socodo Barakac Xoogan oo ay dadku Ka Qaxayaan Al-Shabaab | shumis.net
Home » alshabaab » kenya » News » Saddex Deegaan oo Muhiim u ah Dalxiiska Kenya oo uu ka socodo Barakac Xoogan oo ay dadku Ka Qaxayaan Al-Shabaab
Saddex Deegaan oo Muhiim u ah Dalxiiska Kenya oo uu ka socodo Barakac Xoogan oo ay dadku Ka Qaxayaan Al-Shabaab
Boqolaal qoys ayaa bilaabay in ay isaga barakacaan Deegaano ka tirsan Jasaiirada Lamu ee Dalka Kenya kadib markii halkaasi ay Weeraro u joogteeyeen dagaal yahano ka tirsan Xarakada Al Shabaab.
Barakaca Qoysaskaan ee ka socda Deegaanada Keysari, Enyasa, Jima iyo Boromooko oo wada hoostaga Jaziirada Laamuu ayaa ka dambeeysay , markii Al-Shabaab ay Weerar ku qaadeen Degaanka Keysari, halkaasina ay ku dileen ugu yaraan 3 Ruux.
Dadkan barakaca ah ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah Xoolo Dhaqato ku sugnaa Degaanadaasi oo iyaguna Xaalad amaan darteed ay naftooda ugala cararay Degaanadaasi ay Weeraradu u joogteeyeen Xarakada Al-Shabaab.
Sikastaba, Isniintii ayey aheyd markii Banaanbax ballaaran islamarkaana looga soo horjeeday Weerada joogtada ah ee Xarakada Al-Shabaab ay Boqolaal Ruux oo careysani ay ka dhigeen Degaanka Mpeketoni ee Jasiirada Laamuu ee Dalka Kenya.
Title: Saddex Deegaan oo Muhiim u ah Dalxiiska Kenya oo uu ka socodo Barakac Xoogan oo ay dadku Ka Qaxayaan Al-Shabaab
Posted by galmada Net, Published at February 03, 2016 and have 0 comments